Profile Company - Jiangnan CNC Machine Tool Co., Ltd.
News iyo Warfaafinta
Drilling iyo xarun laga faaiidaysanayo
Mashiinka nadiifinta cadaadis sarreeya
xarunta machining Horizontal
xarunta machining Vertical
Jiangnan CNC Machine Tool Co., Ltd. la aasaasay 2006. Waa teknoolojiyad sare ganacsi oo casri ah maamulka ku takhasusay isdhexgalka cilmi, horumarka, wax soo saarka, iibinta iyo ka dib-iibka adeega xarumaha machining CNC, xuquuqda dejinta iyo dhoofinta . Shirkadda waxa uu ku yaalaa Wenzhou, xeebta Badda Shiinaha East la dhaqaalaha uu aad u horumarsan. Waxaana ay ku aaddan meel ka mid ah 35 Mu iyo in ka badan 25,000 mitir murabac oo dhismayaasha warshad caadiga ah. Iyada oo in ka badan 100 oo aqoon sare leh, teknoolojiyad sare, tayo sare leh shaqaale xirfad leh.
Jiangnan CNC Machine Tool Co., Ltd. waxaa ka go'an in falsafada ganacsiga ee "sayniska iyo farsamada sida hogaaminaya, technology sida hogaaminaya, suuqa-oriented" ah. Kor ruuxa wada shaqayn ah "ka faa'iidaysanaya oo dhan awoodaha, ku dadaalaya wanaagga iyo dadka gelinaya marka hore" ku, u hoggaansamaan Siyaasadda istiraatiijiga ah ee biloowga sare, maalgashiga sare iyo technology sare, iyo israac bandhigo rigidity top farsamo xarumaha siman oo toosan machining CNC iyo CNC qodista taxane mashiinka la filaayo in design dhismaha. Shirkadda ayaa xarunta aduunka ee heerka sare super weyn CNC processing pentahedron iyo u eegis super dheer oo ballaadhan CNC Guideway Furimaha Dagaalka iyo qalabka baaritaanka Renishau sax sare. Hoggaansanaayeen rogo oo ganacsi oo ka mid ah "Tayada Best, Mutual Benefit Price iyo Adeegga Naseexayn", shirkadda dhaqmayso siyaasad tayada "Tayada First, Customer First", iyo kal iyo laab ah bixisaa adeeg heer sare ah si ay macaamiisha our.
Waxaan u isticmaali doonaa tayada wax soo saarka ugu fiican ee si fiican u adeegaan macaamiisha iyo asxaabta, si adag adkayn fikrad tayo adag oo dhug yeesha, tiiriya ruux xirfad, diiradda on faa'iidooyinka muhiimka ah, eryan tayo wanaagsan leh, heer sare, joogta ah. Waa raacdada weligeed ah in si joogto ah loo horumariyo qiimaha shirkadaha adeegga oo tayo sare leh.
Vertical Machining Center, Vertical Machining Centre, Wheel Hub Machining Center, Cnc Vertical Machining Centre,